नेपाली कांग्रेस को १४ औं महाधिवेशन : सभापतिमा देउवा विरुद्ध निधि कति भारी? - Shirish News
नेपाली कांग्रेस को १४ औं महाधिवेशन : सभापतिमा देउवा विरुद्ध निधि कति भारी?
सभापति देउवाले उत्तराधिकारी तयार नगर्दा निधिले विद्रोह गरेको
२०७८ आश्विन ५, मंगलवार १५:१५ बजे
राजनीतिक विश्लेषक दुर्गा सुवेदी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा सधैं ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ’ भन्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । उनको यही प्रवृत्तिका कारण कांग्रेसले बलियो उत्तराधिकारी पाउन नसकेको उनको ठहर छ ।
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा विमलेन्द्र निधिले पार्टी सभापतिको उम्मेदवारी दिने निर्णय गर्नुको प्रमुख कारण देउवाको गलत प्रवृत्ति नै रहेको उनको तर्क छ । निधिको विद्रोहलाई देउवाको उत्तराधिकारी नबनाउने र सधैं ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ’ भन्ने प्रवृत्ति ठान्छन् सुवेदी । उनका अनुसार नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि उत्तराधिकारी तयार गर्ने अघोषित चलन छ ।
उनी भन्छन्, ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुशील कोइरालालाई उत्तराधिकारी तयार पारेका थिए, म पछिको पार्टी नेतृत्व हो भनेर चिनाएका थिए, त्यसअघि पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी)ले गिरिजाप्रसाद कोइराला (गिरिजाबाबु)लाई उत्तराधिकारी देखाएका थिए, तर गिरिजाबाबुले पर्खिनु भएन, एक किसिमले कांग्रेसमा भावी नेतृत्व तयार गर्ने प्रचलन जस्तै छ ।’
तर, सभापति देउवाले उत्तराधिकारी तयार नगर्दा निधिले विद्रोह गरेको विश्लेषक सुवेदी बताउँछन् । ‘यो उचित पनि छ । मान्छे कुनै नेताको पछि किन लाग्छन्, किन सहयोग गर्छन् ? भन्दा त म पनि भोलि नेता बन्न सकूँ भनेर हो नि,’ सुवेदीले फरकधारसँग भने, ‘निधिलाई पनि देउवापछि म सभापति हुँला भन्ने लागेको हो, स्वाभाविक छ त्यो र देउवालाई यसपटक म उठ्छु, सहयोग गर्नुहोस् भन्दा नमानेपछि विद्रोह गरेका हुन् ।’
कांग्रेसको केन्द्रीय तहको राजनीतिमा देउवाको प्रवेश आठौं महाधिवेशनसँगै भएको हो । उनको नेतृत्वको केन्द्रीय समितिको उपसभापति विमलेन्द्र निधि हुन् । पार्टीको दसौं महाधिवेशनदेखि कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा उनको प्रवेश भएको हो ।
कांग्रेस इतिहास हेर्दा केन्द्रीय राजनीतिमा देउवाको प्रवेश निधिको भन्दा दुई महाधिवेशन अघिदेखि भएको देखिन्छ ।
संयोग, दसौं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएपछि देउवा र निधिको हैसियत केन्द्रीय सदस्य नै हो । २०५९ सालमा कांग्रेस विभाजनपछि देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गर्दा पनि निधिले साथ दिए । जतिबेला देउवा सभापति र निधि सदस्य भए ।
प्रजातान्त्रिकले ११ औं महाधिवेशन गर्दा देउवाले निधिलाई महामन्त्री बनाए । एकताको १२ औं महाधिवेशन हुँदा पनि देउवासँगै रहेका निधिलाई १३ औं महाधिवेशनपछि उपसभापति देउवाले नै बनाए । र, देउवा नेतृत्वको समितिको कार्यकाल अहिले सकिएको छ ।
अब, मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन हुँदै छ । महाधिवेशनको सुरसार चल्दै गर्दा यी दुई नेता एकै नहुने स्पष्ट भइसकेको छ । अर्थात् एकविरुद्ध अर्को लड्ने पक्का भएको छ–सभापति पदमा । यी दुई नेताबीचको २० वर्षे राजनीतिक गठजोड अब टुट्ने भएको छ ।
निधि नयाँ बानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर सभापति पदका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा देउवाविरुद्ध निधि कति भारी हुन सक्लान् ? किन देउवाविरुद्ध निधिको विद्रोह ? लगायतका प्रश्नहरू स्वयम् कांग्रेसीजनको छ ।
निधि तत्कालीन महामन्त्री महेन्द्रनारायणका छोरा हुन् । पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा महेन्द्रनारायण कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति रहँदा महामन्त्री थिए । उनकै छोरा विमलेन्द्र राष्ट्रिय राजनीतिमा छाएको दुई दशक नाघेको छ ।
पार्टीको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीति गर्दै केन्द्रीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी संगठनमा बलियो पकड राख्ने नेतामध्येका एक मानिन्छन् । उनको राजनीतिक भूगोल मधेस हो । अन्यन्त्र भन्दा त्यहाँका अधिकतम महानिधिवेशन प्रतिनिधिको मत निधिलाई जान सक्ने विश्लेषण कांग्रेस मामिलाका जानकार वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको छ ।
कम्तीमा डेढ सयभन्दा बढी मत निधिले पाउन सक्ने र उक्त मत देउवाको जित र हारमा कारक बन्ने अवस्था हुने त्रिपाठी बताउँछन् । यसअघि १३ औं महाधिवेशनमा देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीचको मतान्तर ५२६ हो । देउवाले पौडेलले भन्दा २६४ मत बढी पाएका थिए ।
निधिले कम्तीमा डेढ सय मत प्राप्त गर्दा देउवालाई जितमा असर पर्ने सक्ने त्रिपाठी देख्छन् । फोरम लोकतान्त्रिकबाट कांग्रेस आएका नेता विजयकुमार गच्छदार र राप्रपाबाट आएका सुनीलबहादुर थापा पक्षबाट निधिलाई सहयोग भयो भने उनको पकड थप बलियो हुने छ । कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि निधिलाई सहयोग गर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ ।
सुवेदीका अनुसार, गच्छदार र थापाले निधिको अभाव पूर्ति गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘निधि सांगठनिक शक्ति भएको नेतामा पर्छन्, संगठनमा उनको जरा छ, देशभर चिनिएका हुन् र नेपाली कांग्रेसको सभापति पदका निकै राम्रा उम्मेदवार हुन्, त्यही भएर गच्छदार र थापा पक्षको मतले थेग्न सक्दैन,’ उनी भन्छन् ।
कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशनका मतदाता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुन् । उनीहरू प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रसँगै भातृ तथा शुभेच्छुक संगठन, जनसम्पर्क समितिलगायतबाट निर्वाचित भएर आउँछन् ।
निधिले यी विभिन्न निकायबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि कति ल्याउँछन् ? यो यकिन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनलाई पर्खिनुपर्ने भएको छ । सोही आधारमा उनी देउवाप्रति कति भारी हुन्छन् ? निक्र्योल हुने छ ।
यस्तै, उनले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्दा हिन्दू धर्मप्रति झुकाव देखाएका छन् । जबकि, उनी पहिले धर्मनिरपेक्षताप्रति कट्टर देखिएका थिए । सम्पर्क कार्यालय स्थापनापछि उनमा देखिएको हिन्दू धर्मप्रतिको झुकावले कांग्रेसभित्रको केही हिन्दूवादी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू प्रभावित हुने ठानिएको छ ।-फरकधारबाट